यूहन्ना ३ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद (२०१०)
३ त्यस बेला एक जना मानिस थिए, जो फरिसी थिए। तिनको नाम निकोदेमस थियो र तिनी यहूदीहरूका शासक* पनि थिए। २ यी मानिस राती उहाँकहाँ आएर यसो भने: “रब्बी, हामीलाई थाह छ, तपाईं परमेश्वरको तर्फबाट आउनुभएको शिक्षक हुनुहुन्छ; किनकि यदि परमेश्वर साथमा हुनुहुन्न भने कसैले पनि तपाईंले गर्नुभएजस्ता चमत्कारहरू गर्न सक्दैन।” ३ यो सुनेर येशूले तिनलाई भन्नुभयो: “तिमीलाई म साँच्चै भन्छु, फेरि नजन्मेसम्म कसैले पनि परमेश्वरको राज्य देख्न सक्दैन।” ४ निकोदेमसले उहाँलाई सोधे: “हुर्किसकेको मानिस कसरी फेरि जन्मन सक्छ? आफ्नी आमाको गर्भमा पसेर के ऊ फेरि जन्मन सक्छ र?” ५ येशूले जवाफ दिनुभयो: “तिमीलाई म साँच्चै भन्छु, पानी र पवित्र शक्तिद्वारा नजन्मेसम्म कोही पनि परमेश्वरको राज्यमा पस्न सक्दैन। ६ जो शरीरद्वारा जन्मन्छ, ऊ मानिसको सन्तान हो अनि जो पवित्र शक्तिद्वारा जन्मन्छ, ऊ परमेश्वरको सन्तान हो। ७ तिमीहरू फेरि जन्मनुपर्छ भनी मैले तिमीलाई भनेकोमा अचम्म नमान। ८ बतास* आफूलाई जता इच्छा लाग्छ, त्यतै बहन्छ। तिमीले बतास चलेको आवाज त सुन्छौ तर त्यो कहाँबाट आएको हो र कहाँ जाँदैछ, तिमीलाई थाह हुँदैन। पवित्र शक्तिद्वारा जन्मेको हरेक मानिस पनि त्यस्तै हुन्छ।” ९ यो सुनेर निकोदेमसले उहाँलाई सोधे: “यी कुराहरू कसरी हुन सक्छन्‌?” १० येशूले तिनलाई जवाफ दिनुभयो: “इस्राएलीहरूको शिक्षक भईकन पनि के तिमीलाई यी कुराहरू थाह छैन? ११ तिमीलाई म साँच्चै भन्छु, हामीलाई जे थाह छ, त्यही बोल्छौं अनि जे देखेका छौं, त्यसैको साक्षी दिन्छौं तर तिमीहरू हामीले दिने साक्षी स्वीकार्दैनौ। १२ मैले तिमीहरूलाई पृथ्वीका कुराहरूबारे बताउँदा त तिमीहरू विश्वास गर्दैनौ भने मैले तिमीहरूलाई स्वर्गका कुराहरूबारे बताएँ भने तिमीहरूले झनै कसरी विश्वास गरौला? १३ साथै, कुनै मानिस स्वर्ग उक्लेको छैन तर मानिसको छोरा भने स्वर्गबाट ओर्लेको छ। १४ जसरी मोशाले उजाडस्थानमा सर्पलाई टाँगे, त्यसरी नै मानिसको छोरा पनि टाँगिनै पर्छ, १५ ताकि ऊमाथि विश्वास गर्ने हरेकले अनन्त जीवन पाओस्। १६ “किनकि परमेश्वरले संसारलाई यत्ति धेरै प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एक मात्र छोरा दिनुभयो, ताकि ऊमाथि विश्वास गर्ने हरेक नाश नहोस् तर उसले अनन्त जीवन पाओस्। १७ किनकि परमेश्वरले आफ्नो छोरालाई संसारको न्याय गर्न होइन, तर ऊमार्फत संसारको उद्धार होस् भनेर पठाउनुभयो। १८ जसले ऊमाथि विश्वास गर्छ, उसको न्याय गरिनेछैन। जसले ऊमाथि विश्वास गर्दैन, उसको न्याय भइसकेको छ, किनकि उसले परमेश्वरको एक मात्र छोराको नाममा विश्वास गरेको छैन। १९ अब यस आधारमा न्याय हुन्छ, संसारमा ज्योति आएको छ तर मानिसहरूले ज्योतिलाई भन्दा अन्धकारलाई मन पराए, किनकि तिनीहरूका कामहरू दुष्ट थिए। २० जसले खराब कामहरू गरिरहन्छ, उसले ज्योतिलाई घृणा गर्छ र आफ्ना कामहरू प्रकट नहोऊन्‌ भनेर ज्योतिमा आउँदैन। २१ तर जसले असल काम गर्छ, ऊचाहिं परमेश्वरको इच्छाबमोजिम आफूले गरिरहेका कामहरू प्रकट होऊन्‌ भनेर ज्योतिमा आउँछ।” २२ यसपछि येशू र उहाँका चेलाहरू यहूदियाको इलाकामा जानुभयो अनि उहाँले तिनीहरूसित त्यहाँ केही समय बिताउनुभयो र बप्तिस्मा गराउनुभयो। २३ तर यूहन्नाले पनि सालीमनजिकै एनोनमा बप्तिस्मा गराउँदैथिए, किनकि त्यहाँ प्रशस्त पानी थियो अनि मानिसहरू तिनीकहाँ आउँथे र बप्तिस्मा गर्थे। २४ अनि यतिबेलासम्म यूहन्ना झ्यालखानामा परिसकेका थिएनन्‌। २५ तब यूहन्नाका चेलाहरूले शुद्धीकरणको विषयमा एक जना यहूदीसित विवाद गरे। २६ अनि तिनीहरू यूहन्नाकहाँ गएर तिनलाई भने: “रब्बी, जुन मानिस यर्दनपारि तपाईंसित हुनुहुन्थ्यो अनि जसको विषयमा तपाईंले साक्षी दिनुभएको थियो, हेर्नुहोस्, उहाँले त बप्तिस्मा गराउँदै हुनुहुन्छ अनि सबै जना उहाँकहाँ जाँदैछन्‌।” २७ यूहन्नाले जवाफ दिंदै भने: “परमेश्वरले नदिनुभएसम्म मानिसले एउटै कुरा पनि पाउन सक्दैन। २८ म ख्रीष्ट होइन तर उहाँको अघि-अघि पठाइएको हुँ भनी मैले भनेको थिएँ भन्ने कुराको तिमीहरू आफै साक्षी छौ। २९ जोसित दुलही छ, उही दुलहा हो। अनि दुलहाको नजिकै उभिएर उसको स्वर सुन्ने दुलहाको साथीको खुसीको सीमा रहँदैन। त्यसैले म पनि आनन्दले ओतप्रोत भएको छु। ३० उहाँ बढ्दै जानुपर्छ तर म भने घट्दै जानुपर्छ।” ३१ जो माथिबाट आउँछ, ऊ अरू सबैको माथि हुन्छ। जो पृथ्वीबाट आउँछ, ऊ पृथ्वीको हुन्छ र पृथ्वीकै कुराहरू बोल्छ। जो स्वर्गबाट आउँछ, ऊ अरू सबैको माथि हुन्छ। ३२ आफूले जे सुनेको छ र जे देखेको छ, उसले त्यसैको साक्षी दिन्छ तर कसैले पनि उसको साक्षी स्वीकारिरहेको छैन। ३३ जसले उसको साक्षी स्वीकार गरेको छ, त्यसले परमेश्वर सत्य हुनुहुन्छ भनेर आफ्नो छाप लगाएको छ। ३४ जसलाई परमेश्वरले पठाउनुभएको हो, उसले परमेश्वरकै कुराहरू बोल्छ, किनकि उहाँले पवित्र शक्ति दिंदा नापेर दिनुहुन्न। ३५ बुबाले छोरालाई प्रेम गर्नुहुन्छ र सबै थोक उहाँको हातमा सुम्पनुभएको छ। ३६ जसले छोरामाथि विश्वास गर्छ, उसले अनन्त जीवन पाउँछ; जसले छोराको आज्ञा पालन गर्दैन, उसले जीवन देख्न पाउनेछैन तर ऊमाथि परमेश्वरको क्रोध आइपर्नेछ।
^ यूह ३:१ * अर्थात्‌, “यहूदी न्यायपरिषद्का सदस्य।”
^ यूह ३:८ * ग्रीकमा न्युमा। अतिरिक्त लेख ७ख हेर्नुहोस्।